समाचार - Online Majdoor
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनमा चालक, सहचालक र यात्रुले मास्कसँगै भाइजर (फेस सिल) को प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ को...
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । मानव अधिकार एलायन्सको आयोजनामा कोभिड – १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा कोभिड – १९ को ‘सहर केन्द्रित...
कोभिड उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति जनता आक्रोशित
बुटवल । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्ने र सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार दिनदिनै पन्छिँदै गएको कुरा सुनेर जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारी नीतिको विरोध गर्दै सडकमा असन्तोष व्यक्त...
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत सार्वजनिक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाडा लिन थालेका छन् । सवारी साधनमा भाडा दररेट नराखिएको, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको...
अगुवा किसान कार्यकर्ता कुलबहादुर कवांको निधन
भक्तपुर, २६ असोज । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका अगुवा किसान नेता कुलबहादुर कवांको ८२ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई उपचारको लागि मध्यपुर अस्पताल लगिएकोमा साँझ...
दुशान्बे, ताजिकिस्तान, २६ असोज (एएफपी) । ताजिकिस्तानका प्रभावशाली नेता इमोमाली राख्मोन ताजिकिस्तानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित विजयी हुनुभएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार नेता इमोमालीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको...
ट्रम्पको चुनावी अभियानले मेरो टिप्पणी गलतरूपमा प्रयोग ग¥यो : डा. एन्थोनी फाउची
अमेरिकाका उच्च सरकारी वैज्ञानिक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले आफूले फरक सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई गलत सन्देश जाने गरी सम्पादन गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा प्रयोग भएको...
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण चौथो चरणमा
काठमाडौँ, २६ असोज । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको भाइरोलोजिष्ट डा. बाबुराम मरासिनीले बताउनुभएको छ । पछिल्लो केही दिन यता सङ्क्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्णरूपमा समुदायमा प्रभाव...